Relationships Archives - Page 76 of 79 -
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အနမ်းပေါင်း ငါးဆယ်ကျော်ရှိပါတယ်။ ဒီထဲကမှ ကျော်ကြားလှတဲ့ အနမ်းများကို တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ ကလေးဘဝတည်းက မွှေးမွှေးပေးတတ်ကြတာ လူတိုင်းပါ။ ဖြူစင်တဲ့အနမ်းတွေက စလို့ ကိုယ့်ချစ်သူကို မြတ်နိုးစွာနမ်းတာ အထိ ကြုံဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူကိုရော ဘယ်လိုနမ်းသလဲ။ တခြားသူတွေကရော ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာ ချစ်သူကို ဘယ်လိုနမ်းကြသလဲဆိုတာ သိရဖို့ ကဲ အောက်မှာ ဖတ်ကြည့်။ – နဖူးပြင်အနမ်း ဒီအနမ်းက မြတ်နိုးမှုကို ပြသပါတယ်။ – ပြင်သစ်အနမ်း လျှာချင်းခလုတ်တိုက်ပြီး နမ်းတဲ့အနမ်းပါ။ ချစ်သူချင်းနမ်းတဲ့ အနမ်းလို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ – နှစ်လွှာတစ်လွှာအနမ်း သူကတော့ ကိုယ့်နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကြား သူ့နှုတ်ခမ်းတစ်လွှာ ထည့်ပြီးနမ်းတဲ့အနမ်းပါ။ READ အချစ်ဦးကို ဘာ့ကြောင့် မေ့မရဖြစ်ကြရသလဲ။ – နားသံသီးအနမ်း နားရွက်ထဲကို လျှာဖျားလေးနဲ့ ထိုးမွှေပြီး နမ်းတဲ့အနမ်းပါ။ […]
Posted on December 22, 2016 April 29, 2017 Author Comment(0)
ချစ်ပေမယ့် လက်လွှတ်တော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ မိန်းကလေးတွေ ပြုလုပ်တတ်တဲ့ အမူအကျင့်များကို ယောက်ျားလေးတွေသိသင့်ပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေဟာ weaker sex လို့ခေါ်တဲ့ အားနွဲ့တဲ့သူများဖြစ်သလို စိတ်ဓာတ်နူးညံ့သူ အများစုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ စိတ်ထားနူးညံ့ပေသော်ငြား တွန်းအားတစ်ခုခု ရှိလာတဲ့အခါမှာ သာမန်ယောက်ျားလေးတွေထက် စိတ်ဓာတ်ပြတ်သားတတ်ကြပါတယ်။ ဥပမာ ကိုယ်ချစ်ရပေမယ့်လည်း လမ်းခွဲတော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားတာမျိုးပေါ့။ ဒီလိုမိန်းကလေးအများစုဟာ ဦးနှောက်ကို ဦးစားပေး အသုံးပြုကြပါတယ်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ သူ့ချစ်သူရဲ့ ဂရုစိုက်မှုကို မရရင် ဘာတွေလုပ်တတ်ကြသလဲ။ – ယောက်ျားလေးတွေဘက်ကပဲ စပြီး အခေါ်အပြောလုပ်ရပါတယ်။ – သဝန်မတိုတတ်တော့ပါဘူး။ – အင်း ဟင့်အင်း စတဲ့ တိုတိုပြတ်ပြတ် စကားလုံးတွေနဲ့ တုံ့ပြန်လာပါတယ်။ – တခြားယောက်ျားလေးတွေနဲ့ ရင်းနှီးစွာ နေပြပါတယ်။ – သင်စကားလာပြောတာနဲ့ မသိချင်ယောင် ဆောင်နေပါတယ်။ – […]
Posted on December 21, 2016 December 21, 2016 Author Comment(0)
စိတ်ရှည်သည်းခံတတ်တဲ့ ချစ်သူကို သူမဘက်က ဘယ်တော့မှ စပြီး စွန့်ခွာသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သူမကို ရှင် တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် သူမ ဘေးနားမှာ ရှိနေတုန်း ဂရုစိုက်ပေးပါ။ သူမကို ရှင်အလေးထားကြောင်း သူမသိအောင် ပြပေးပါ။ သူမက ရှင့်ထက် ဘယ်လောက်ပဲ ငယ်ငယ် သူမအပေါ် လေးလေးစားစားဆက်ဆံပေးပါ။ ရှင်အမှားလုပ်တိုင်း သူမက ရှင့်ကို ဘယ်လောက်ပဲ ခွင့်လွှတ်တယ်ပြောပါစေ သူမ ရင်ထဲမှာ ဒဏ်ရာလေးတွေကတော့ ကျန်ခဲ့မှာ အမှန်ပါပဲ။ ဒါကြောင့် သူမ မကြိုက်တာလေးတွေကို သတိထားပြီး ရှောင်ကြဉ်ပေးပါ။ သူမကို လူကြားထဲမှာ မအော်မငေါက်ပါနဲ့။ အဲ့လို အော်လိုက်တိုင်း သူမ ရှင့်ကို တဖြည်းဖြည်း နာကျည်းလာလိမ့်မယ်။ ယုံကြည်မှုတွေ ပျောက်ဆုံးသွားလိမ့်မယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သူမနဲ့ ယှဉ်လာတာတဲ့အခါ မျှမျှတတ ရွေးချယ်ပါ။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ […]
Posted on December 21, 2016 Author Comment(0)
ရုပ်ဆိုးတယ်ပြောလို့ ညီမလေး ငိုနေတာ မမတွေ့လိုက်တယ်။ မှတ်ထား ညီမလေး မပြင်တတ်တဲ့ မိန်းကလေးပဲ မချောတာ၊ ပြင်တတ်သွားရင် သူ့အလိုလို ချောလာလိမ့်မယ်။ သို့ ညီမလေးရေ ညီမလေးကို မမ ပြောစရာလေးတွေရှိတယ်။ သေချာမှတ်ထားနော်။ ညီမလေး ငယ်ငယ်က မက်ခဲ့တဲ့ အိမ်မက်လေးတွေကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ မကြောက်နဲ့နော်။ ညီမလေး ခွင့်မပြုဘဲနဲ့ ဘယ်သူကမှ ညီမလေးရဲ့ အိမ်မက်တွေကို ဟန့်တားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်။ ညီမလေးကို ရုပ်ဆိုးတယ်ပြောလို့ ညီမလေး ငိုနေတာ မမတွေ့လိုက်တယ်။ မှတ်ထား ညီမလေး မပြင်တတ်တဲ့ မိန်းကလေးပဲ မချောတာ၊ ပြင်တတ်သွားရင် သူ့အလိုလို ချောလာလိမ့်မယ်။ ညီမလေးဆီက အချစ်ဆိုတဲ့ စကား သဲ့သဲ့ထွက်လာတာ မမ ကြားမိလိုက်တယ်။ မမ မှာချင်တာက ညီမလေးဘဝမှာ အချစ်နဲ့ အနည်းဆုံး တစ်ခါတော့ […]
ချစ်သူနဲ့ ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ယှဉ်လာရင် ဒုတိယ တစ်ခုကို ကျွန်မဦးစားပေးမယ်
လူတစ်ယောက်ကို ဒီလူဟာ ဘာလဲ။ ဘယ်လောက် တန်ဖိုးရှိလဲ။ အရေးပါသလဲ ဆိုတာကို အလုပ်က တန်ဖိုးဖြတ်ပေးတယ် ဆိုတာ သင်မယုံရင် ဒီစာလေးကို ဖတ်ကြည့်ပါ။
Posted on December 18, 2016 August 4, 2017 Author Comment(0)
ဒိန်ချဉ်ကြိုက်သူများအတွက် ဒိန်ချဉ်ကို ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေ လုပ်စားကြမယ်။ နို့ထွက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ဒိန်ချဉ်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်မှာ လိုအပ်တဲ့ဓာတ်ကို ဖြည့်ပေးပါတယ်။ ဒိန်ချဉ်ကြိုက်သူများတာမို့ ဒိန်ချဉ်ကို ဒီအတိုင်းစားရတာ ရိုးလာရင် တခြားနည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ အရသာရှိရှိ ပြုပြင်စားလို့ရပါတယ်။ ဒိန်ချဉ်စတော်ဘယ်ရီ မိမိသောက်မည့်ဒိန်ချဉ်ခွက်ထဲသို့ စတော်ဘယ်ရီယိုကို လက်ဖက်ရည်ဇွန်းနှစ်ဇွန်း ထည့်ပေးပါ။ နှံ့အောင်မွှေပြီး စားကြည့်ပါ။ ထူးခြားဆန်းသစ်တဲ့အရသာကို တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒိန်ချဉ်ကွတ်ကီး ကွတ်ကီးလေးတွေအပေါ်က ဒိန်ချဉ်သုတ်ပါ။ ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် အခဲခံပါ။ ခဲသွားလျှင် စားလို့ရပါပြီ။ ဒိန်ချဉ်ရေခဲချောင်း ရေခဲချောင်းလုပ်တဲ့ ခွက်လေးတွေ ရှိပါတယ်။ ခွက်ထဲကို ဒိန်ချဉ်ထည့်ပါ။ မိမိနှစ်သက်ရာ အသီးအနှံ သို့မဟုတ် ဂျယ်လီထည့်ပါ။ အခဲခန်းထဲတွင် ခဲထားပါ။ ခဲလာလျှင် ဒိန်ချဉ်ရေခဲချောင်း ရပါပြီ။ ဒိန်ချဉ်ကိတ် ဒိန်ချဉ်နဲ့ဂျုံမှုန့်ကို ရောပြီး ကိတ်မုန့်ဖုတ်ခိုင်းတာ မဟုတ်ပါဘူး။ […]
Posted on December 18, 2016 Author Comment(0)
Posted on December 18, 2016 June 6, 2017 Author Comment(0)
လူ့ဘဝဟာ ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ ငါ့နားမှ ဘယ်သူမှမရှိပါလားလို့ တွေးမိတဲ့အခါမျိုးမှာ စိတ်ဓာတ်ကျစရာ မလိုပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သင်ဟာ ကံကောင်းတဲ့လူသား တစ်ယောက်ဖြစ်လား ဆိုတာ စစ်ဆေးကြည့်ရအောင်။ လူဖြစ်ရတာ ပင်ပန်းတယ်လို့မခံယူထားပါနဲ့။ သင်မျှော်လင့်တာ နည်းလေလေ သင့်အတွက် ပျော်စရာကောင်းလေလေပါပဲ။ လောကကြီးကို အရမ်းဂရုမစိုက်ဘဲ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာလေးတွေ ဦးစားပေးပါ။ ပျော်ဖို့ကောင်းတာ သင်တွေ့လာလိမ့်မယ်။ တစ်ယောက်တည်းများ အထီးကျန်နေတာလား။ အကောင်းဖက်ကနေ လှည့်တွေးကြည့်ရအောင်။ အားငယ်တဲ့စိတ်လေးကို ဖုံးကွယ်ထားပြီး ဟန်မပျက်နေတတ်လာရင် ကျလာမယ့်မျက်ရည်တွေကြောင့် မျက်နှာကိုမော့ပြီး ပြုံးတတ်လာရင် နောက်ကျောကို ဓားနဲ့ထိုးကြလွန်းလို့ ခံနိုင်ရည်ရှိလာရင် ဒုက္ခရောက်တိုင်း ကူညီမယ့်သူ မရှိလို့ ကိုယ့်အား ကိုယ်ကိုးတတ်လာရင် ငိုချင်စရာတွေကြုံရတိုင်း ကိုယ့်နားက ခေါင်းအုံးလေးကို ပြေးဖက်မိရင်မျက်နှာသစ်သလိုလိုနဲ့ မျက်ရည်တွေပါ ရောပြီးသုတ်ပစ်တတ်လာရင် အခက်အခဲတိုင်းကို ရင်ဆိုင်ရင်း ကျင့်သားရလာခဲ့ရင် ငါတစ်ယောက်တည်းလည်း လုပ်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့ […]
သင်သိပါသလား….အိမ်ရှင်မတွေဟာ…အိမ်မှာဘုရင်မဆိုတာ..??? ပုခက်လွှဲတဲ့လက်က ကမ္ဘာကိုကိုင်လှုပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်..။ကျွန်မတို့မေမေတွေကတော့ ကမ္ဘာကိုင်လှုပ်မလှုပ်တော့မသိပါဘူး….။အိမ်မှာဘာတွေလုပ်လဲဆိုတာ…တစ်ချက်ရှိုးကြည့်ကြည့်လိုက်နော်။ (၁) ပစ္စည်းတွေကို သိမ်းတယ်။ဘယ်နေရာထားလဲမမှတ်မိတတ်ပါ။ (၂)မနက်အိပ်ယာနှိုးတယ်..အမြဲနာရီကိုလိမ်ပြီးစောပြောတယ်။ (၃)အဖေ့မှာ ပိုက်ဆံအကုန်အပ်ရတယ်။ ပြန်တောင်းတော့ပွစိပွစိ။ (၄)အားလို့ငုပ်တုတ်ထိုင်နေပြန်ရင်လည်း “နင်တို့က ငါ့ကိုအားတဲ့အချိန်လေးတောင် ကူမလုပ်ကြဘူး..ပြောတယ်။ ကူလုပ်တော့လည်း ရှုပ်တယ်တဲ့။ (၅)ဈေးကပြန်လာရင် ဘာမှမဝယ်ခဲ့ရဘူး။ပိုက်ဆံကုန်တယ်လို့ပြောတယ်.။ဈေးခြင်းတောင်းကြည့်တော့လည်းအပြည့်။ (၆)ရှော့ပင်ထွက်လို့ပြန်လာတယ်။ကိုယ်တွေမှာ ဈေးအမှန်အတိုင်းမပြောရဲပါ။ (၇)အပြင်ထွက်ခါနီးဆို ပူညံပူညံလုပ်တတ်တယ်။ ဒီအချက်တွေထဲက ပျိုမေတို့မေမေတွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်တဲ့အချက်တွေ ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ ရှိရင်လည်းရှဲပြီးပြလိုက်နော်။အပေါ်က အချက်တွေမည်သို့ပင် ဖြစ်စေ…ကျွန်မတို့အတွက်တော့ မေမေတွေက ကမ္ဘာပေါ်မှာ မရှိမဖြစ်နဲ့ တန်ဖိုးအကြီးဆုံးလူသားတွေပါလော..။
Posted on December 17, 2016 Author Comment(0)
အာလူးကို ကြော်စား ချက်စား ပြုတ်စား သုပ်စားနဲ့ ရိုးအီနေကြပြီလား? ဒါဆိုရင် တစ်မျိုးလေး ထွင်စားရအောင်။ အာလူးလုံးလေးတွေကို ဝက်သားပြားနဲ့လိပ်လိုက်ရင် ဘာအရသာလေးများထွက်လာမလဲ??? အရမ်းလွယ်တယ်နော် လုပ်စားကြည့်ရအောင်လား။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ အာလူး (အလုံးသေး) – ၂၀ လုံး ဝက်သားလွှာ – ၅ ပြား အကြော်မှုန့် – ၃ စားပွဲတင်ဇွန်း သွားကြားထိုးတံ – ၂၀ ချောင်း ဆီ – သင့်ရုံ ပြုလုပ်နည်း – အာလူးများကို ပြုတ်ပြီး အခွံခွာထားပါ။ – ဝက်သားလွှာများကို တစ်ပြားလျှင် လေးပိုင်းဖြတ်ထားပါ။ – အာလူးတစ်လုံးချင်းစီကို ဝက်သားလွှာပတ်ပေးပါ။ – ထို့နောက် အလိပ်ပြေမသွားရန် သွားကြားထိုးတံနှင့်ထိုးပေးထားပါ။ – ဝက်သားအာလူးလိပ်လေးများအား အကြော်မှုန့်လူးပေးပါ။ – […]